août 2015 – filazantsaramada
FAMELAN-KELOKA, FIAINANA MANDRAKIZAY.
« Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra » Matio 23:12 Mety hanakana antsika tsy hiaiky heloka ny zavatra vitantsika na ny ezaka ataontsika samirery, ka mahateny isika hoe: izaho nanaraka ny lalana tsara, izaho nanao ny marina; koa raha handinitena isika, dia toa tsy mahita izay fahotana natao, fa toa tsara daholo […]
Publié parfilazantsaramada août 28, 2015 août 24, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAMELAN-KELOKA, FIAINANA MANDRAKIZAY.
« Aza matoky ny teny lainga hoe: Tempolin’i Jehovah, tempolin’i Jehovah, tempolin’i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny làlanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin’ny olona amin’ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena, na mandatsaka rà marina amin’ity tany ity, sady tsy manaraka andriamani-kafa hahatonga […]
Publié parfilazantsaramada août 21, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TEMPOLIN’I JEHOVAH!
Seminera Fampiofanana voalohany ho an’ny taom-piasana 2015/2016 Tanteraka soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” voalohany ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016) teny amin’ny Espace Hanitra Ambohibao ny 13-14 Aogositra 2015. Fitandremana efatra avy amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo Antsinanana sy Synodam-Paritany Antananarivo Atsimo moa no voakasik’izany. Nahatratra 24 ireo mpandray anjara, izay solon-tena […]
Publié parfilazantsaramada août 20, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
AVY AMINAO NY HARENA SY NY VONINAHITRA.
« Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany… tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy mamôna hianareo » Lioka 16:13 Raha ny amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ny zavatra mampanompo ny olona tsirairay avy. Raha ny teknolojia no resahina, ka singanina amin’izany ny fivoarana eo amin’ny solosaina sy […]
Publié parfilazantsaramada août 14, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AVY AMINAO NY HARENA SY NY VONINAHITRA.
Fiaraha-miasan’ny Firaisan’ny Fifohazana Loterana Malagasy (FIFIL) sy ny Feon’ny Filazantsara
“Fantatro izay inoako” 2 Timoty 1:12 Ny Synodam-Paritany Menabe (SPM) no nampiantrano ny Zaikabe faha-6 n’ny FIFIL tany Morondava ny 4-09 Aogositra 2015 lasa teo. Tsiahivina fa fotoan-dehibe iray ho an’ny Sampana Fifohazana eo anivon’ny Fiangonana Loterana izay tanterahina isaky ny 3 taona izy ity. Ny teny Faneva nampitondraina ny Zaikabe dia ny hoe: “Fantatro […]
Publié parfilazantsaramada août 12, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miasan’ny Firaisan’ny Fifohazana Loterana Malagasy (FIFIL) sy ny Feon’ny Filazantsara
FA IZAY TARIHIN’NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA!
« Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. » Romana 8:16 Indray mandeha nisy ireto olona nanontany an’i Jesosy ny amin’ny tsy nanasan’ny mpianatra tanana rehefa hisakafo ka nitenenan’i Jesosy azy ireo hoe: «ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony; fa ny fony kosa lavitra Ahy» Matio 15:8. Tsy ny fitenenana na ny fomba ivelany […]
Publié parfilazantsaramada août 11, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FA IZAY TARIHIN’NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA!